. * . * . ကြယ်တစင်း . * . * .: သူငယ်ချင်း (ဗညားရှိန်)
ငါတို့ ခင်မင်ခဲ့ချိန်တွေ ကြာနေခဲ့ပြီ
ငါ့တို့ စိတ်တွေ နီးခဲ့ကြလား မသေချာဘူး .. ငါ့အကျင့်အတိုင်း ဘယ်အရာမှ သေချာခဲ့တာ မဟုတ်ခဲ့ဘဲ
ဒါပေမယ့် လိုအပ်ခဲ့ရင်တော့ နီးစပ်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်
အဲဒီရက်လေးနဲ့ ကပ်ကပ်လေးမှာ နှစ်သစ်တခုရှိတယ်
အဲဒီလိုနဲ့ ရက်လေးတရက်တည်းနဲ့ နင်က ငါတို့ထက် နှစ်တနှစ် ကြီးခဲ့တယ် ..
အကိုကြီးပေါ့ .. :D
ငါခုတလော အလုပ်နဲနဲများနေတယ် .. အလုပ်များတယ် အကြောင်းပြမှန်း နင်သိပေမယ့် မသိချင်ယောင်သာ ဆောင်နေလိုက်ပါ .. :D
ငါတို့ နှစ်သစ်တွေ နောက်ထပ် ကြုံရဦးမယ် .. မျှော်လင့်ချက်တွေ ပြည့်ဝအောင် ဆောင်ယူလာပေးမယ့် နှစ်သစ်တွေ ဖြစ်နေမယ်လို့ ငါယုံကြည်တယ် .. နင်လည်း နင့်ယုံကြည်မှုနဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို မစွန့်လွှတ်နဲ့ .. ဆန္ဒသာ ရှိမယ်ဆို ဖြစ်လာရမှာပေါ့ .. ဖိုက်တင်း နော် ...း))
ငါတို့က သိပ်ရင်းနှီးခဲ့လားဆိုတော့လည်း မဟုတ်ခဲ့သလိုပဲ .. ဒါပေမယ့် တချို့ အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ ငါတို့ ပြောဖြစ်ကြတယ် .. ဒီလိုနဲ့ ငါတို့ တယောက် စိတ်ကို တစ်ယောက် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ ဖတ်တတ်ကြမယ် ထင်တယ်နော် .. နင့် ဆန္ဒတွေ ငါသိနေလို့ နင့် ဆန္ဒတွေ တသွေမတိမ်း ဖြစ်မြောက်ပါစေလို့ နင့် နှစ်သစ်မှာ ဆုတောင်းပေးမယ် ..
နှစ်ကတော့ သိပ်မသစ်တော့ဘူး .. ဒါပေမယ့် မဟောင်းသေးတော့ နင် လက်ခံမယ် ထင်ပါတယ် .. (နှစ်သစ်လို့ သုံးတာကိုလေ)
ယုံကြည်တာကို မစွန့်လွှတ်နဲ့ .. ဘယ်လို အခက်အခဲတွေပဲ ကြုံရ ကြုံရ .. နောက်ဆုံး နင်တယောက်တည်းပဲ ကျန်နေပါစေ .. ရောက်အောင် သွားပါ .. ငါ့သူငယ်ချင်း နှစ်သစ်မှာ လူသစ် စိတ်သစ်နဲ့ ပျော်ရွှင် ကြည်နူး နိုင်ပါစေ .. မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ ပိုမို နီးစပ်ပါစေ .. Happy Birthday ဗညားရှိန် (ငါ့ရဲ့ နောက်ကျ လက်ဆောင်ပါ ..း))
မှတ်ချက် ။ ၃၁ ရက်နေ့က သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက်ကြီး ဗညားရှိန်ရဲ့ မွေးနေ့ပါ .. ခေါင်းစဉ် အမျိုးမျိုးနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအပေါ်မှာ ပျက်ကွက်တာတွေ များနေပြီ .. ခုလည်း နောက်ကျမှ မွေးနေ့ ဆုတောင်း ပို့စ်ကို တင်ရပါတယ် .. သွေ့ပုချီ ပါ .. :D ..
ပျော်ရွှင်စရာနေ့သစ်တွေ နှစ်သစ်တွေပေါင်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်ပါစေ သူငယ်ချင်း ..
သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေ အားလုံးကိုလည်း ဒီကနေပဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ် .. နှစ်သစ်မှာ စိတ်တွေ အသစ်နဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိရာကို အမြန်ဆုံး လျှောက်လှမ်းရောက်ရှိနိုင်ကြပါစေ .. *_*happy new year *_*................
ရေးသားသူ မိုးခါး at 1/02/2010 08:52:00 PM
အကြောင်းအရာခွဲ ဒိုင်ယာရီ, အမှတ်တရ, မွေးနေ့
ဟိုရောက် ဒီရောက် (၅)